လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ကိုထိန်းသိမ်းသွားဖို့ကုလကို အမေရိကန်တိုက်တွန်း | Danya Wadi
Posted by danyawadi on February 15, 2019 in သတင်းများ
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈ Myanmar Muslim Media
ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာရဲ့ငြင်းဆန်ပယ်ချမှုတွေဟာ ရယ်စရာကောင်းနေပြီး စစ်တပ်တာဝန် ရှိသူတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီး ဒီထိတ်လန့် စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေသူမနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာကို ဒေါ်စုကိုသိရှိစေဖို့ ဖိအားပေးသွားဖို့ အမေရိကန်က အင်္ဂါနေ့မှာ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
“မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ထဲကအင်အားကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုတွေကိုငြင်းဆန်ပယ်ချနေပါတယ်”လို့ ကုလဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်နစ်ကီဟေလီက လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “သူတို့ရဲ့ယုတ္တိမရှိငြင်းဆန် မှုတွေ ကိုဘယ်သူမှမကန့်ကွက်နိုင်တာသေချာစေဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ရက်စက်မှုတွေကို မျက်မြင်သက်သေတွေ့ရှိမှာကြောင့် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအ၀င် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှရခိုင်ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်မပြုထားဘူး”လို့ ဟေလီကဆိုပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုကိုသတင်းရယူနေတဲ့ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုပါ ဟေလီက တောင်းဆို ထားပါတယ်။ သူတို့ကိုခြွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကျွန်မတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေကိုမြန်မာရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး “မီဒီယာကိုအပြစ်တင်ဖို့သူတို့ဟာလေးစားမှုကင်းမဲ့ပါတယ်” လို့ဟေလီက ထပ်ဖြည့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ရိုက်တာရဲ့အထူးသတင်းပေးပို့ချက်ထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အင်းဒင်ရွာကရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား၁၀ဦးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်နီးချင်းတွေ နဲ့စစ်သားတွေက သတ်ဖြတ်ပြီးမြုပ်နှံထားမှုပါရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်ဆိုင်ရာကုလသံအမတ် ဖရန်စီယိုဒီလာတာက ရိုက်တာ သတင်းဌာန ကပေးပို့ထားရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မြုပ်နှံခံထားရမှုဟာ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရာမြောက်တာကြောင်း လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုကိုမြန်မာကငြင်းဆန်ထားပါတယ်။
ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ ကောင်စီရဲ့ဗီတို အာဏာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ခုခံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေဟာတည်ငြိမ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့ နှစ်နိုင်ငံလုံးကအင်္ဂါနေ့ ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “မီဒီယာရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ဘက်လိုက်မှုတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖို့အသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ခေါင်းစဉ်တပ်မှုတွေ ဘယ်သူ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှာပြီးရှုတ်ချဖို့တွေဟာ အဖြေရှာနေမှုကိုပိုမိုဝေးကွာ မှုပဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်”လို့ ရုရှားနိုင်ငံ ဆိုင်ရာလက်ထောက်ကုလသံအမတ် ဒီမီထရီပိုလန်စကီက သတိပေးခဲ့ ပါတယ်။
လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုသောင်းကျန်းသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်တပ် ရဲ့ စစ်ဆင်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းကတည်းကရိုဟင်ဂျာ၆သိန်း၉သောင်းနီးပါးရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တောင်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါ တယ်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအများအပြားရှိထားတယ်လို့ ကုလကပြောကြား ထားပါတယ်။ “အခြေအနေတွေဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားဖို့အထောက်အကူမဖြစ်သေးဘူး”လို့ ကုလ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖြစ်သူ ဖီလစ်ပိုဂရန်ဒီက လုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသံအမတ်ဟောင်ဒိုဆွန်က တစ်ချို့သံတမန်တွေ ရခိုင် ပြည် နယ်ထဲသွားရောက်နိုင်တယ် လို့ပြောကြားသလို “ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မသွားရောက်ဖို့အကြောင်းကဒါဟာအချိန်ကောင်းမဟုတ်ဘူး”လို့ ကူဝိတ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာကုလသံအမတ် မန်ဆော အာယဒ် အဲလ်-အိုတာဘိုင်က ဒီလကပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာရဲ့ဟောင်ဒိုဆွန်က မြန်မာ စစ်တပ် ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ ARSA သောင်းကျန်းသူ ၁၀ဦး ကို အင်းဒင်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာသုတ်သင်ပြီးမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေဟာစစ်တပ်နဲ့ရဲအရာရှိတွေနဲ့ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့တစ်ချို့ရွာသားတွေပါဝင်ပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တာဝန် ယူမှုနဲ့ အားပေးမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်”လို့ သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်လှမ်းမှုတွေအတွက် ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး “မြန်မာဟာမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဒီဇင်ဘာမှာသတင်းထောက်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုဟာ သတင်းထောက်လှမ်း ရေးလုပ်မှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်စာတမ်းစာတမ်းတွေကိုတရားမ၀င်ပိုင်ဆိုင်ထားမှုအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်”လို့ ဟောင်ဒိုဆွန်ကပြော ဆိုခဲ့ပါ တယ်။
“နိုင်ငံသားတိုင်းဟာအမိမြေရဲ့တည်ရှိဥပဒေကိုသစ္စာဆိုထားတာဖြစ်ပြီး သတင်းထောက်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်”လို့ သူကပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ နယ်သာလန်နဲ့ ကာဇက်စတန် တို့ဟာ အင်္ဂါနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်း ရိုက်တာ သတင်း ထောက်တွေကိုပြန်လွှတ်သွားဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
Reuters သတင်းဌာနပါ Michelle Nichols ရေးသားသည့် “US. Urges U.N. to hold Myanmar military accountable for ethnic cleansing” အမည်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်သတင်းကိုညောင်နီရွက် (Myanmar Muslim Media) ကမြန်မာဘာသာသို့ ဆီလျော် အောင်ပြန်ဆိုသည်။
ရာဇာလူမျိုးတုံး သုတ်သင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ကိုထိန်းသိမ်းသွားဖို့ကုလကို အမေရိကန်တိုက်တွန်း
ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာရဲ့ငြင်းဆန်ပယ်ချမှုတွေဟာ ရယ်စရာကောင်းနေပြီး စစ်တပ် တာဝန်ရှိ သူတွေကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဒီထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေသူမနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာကို ဒေါ်စုကိုသိရှိစေဖို့ဖိအားပေးသွားဖို့ အမေရိကန်ကအင်္ဂါနေ့မှာ ကုလလုံခြုံရေး ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
“မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ထဲကအင်အားကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုတွေကိုငြင်းဆန်ပယ်ချနေပါတယ်”လို့ ကုလဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်နစ်ကီဟေလီက လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောကြားခဲ့ပါ တယ်။ “သူတို့ရဲ့ယုတ္တိမရှိငြင်းဆန်မှုတွေကိုဘယ်သူမှမကန့်ကွက်နိုင်တာသေချာစေဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ရက်စက်မှုတွေကို မျက်မြင် သက်သေတွေ့ရှိမှာကြောင့် ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီအပါအ၀င် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှရခိုင်ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်မပြုထားဘူး”လို့ ဟေလီကဆိုပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုကိုသတင်းရယူနေတဲ့ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုပါ ဟေလီက တောင်း ဆိုထားပါတယ်။ သူတို့ကိုခြွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကျွန်မတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆို ပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေကိုမြန်မာရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး “မီဒီယာကိုအပြစ်တင်ဖို့သူတို့ဟာလေးစားမှုကင်းမဲ့ပါတယ်” လို့ဟေလီကထပ်ဖြည့်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ရိုက်တာရဲ့အထူးသတင်းပေးပို့ချက်ထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အင်းဒင်ရွာကရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား၁၀ဦးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့စစ်သားတွေက သတ်ဖြတ်ပြီးမြုပ်နှံထားမှုပါရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်ဆိုင်ရာကုလသံအမတ် ဖရန်စီယို ဒီလာတာက ရိုက်တာ သတင်းဌာနကပေးပို့ထားရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားတွေအစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မြုပ်နှံခံထားရမှုဟာ လူသားမျိုးနွယ် အပေါ်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ရာမြောက်တာကြောင်း လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုကိုမြန်မာကငြင်းဆန်ထားပါတယ်။
ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ ကောင်စီရဲ့ ဗီတို အာဏာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ခုခံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေဟာတည်ငြိမ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့ နှစ်နိုင်ငံလုံးကအင်္ဂါနေ့ ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “မီဒီယာရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ဘက်လိုက်မှုတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖို့အသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ခေါင်းစဉ်တပ်မှုတွေ ဘယ်သူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှာပြီးရှုတ်ချဖို့တွေဟာ အဖြေရှာနေမှုကို ပိုမိုဝေးကွာမှုပဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်”လို့ ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာလက်ထောက်ကုလသံအမတ် ဒီမီထရီပိုလန်စကီက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုသောင်းကျန်းသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်တပ် ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပေါ်လာ ခဲ့တဲ့ပြီး ခဲ့တဲ့သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းကတည်းကရိုဟင်ဂျာ၆သိန်း၉သောင်းနီးပါးရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတောင်ပိုင်း ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအများအပြားရှိထားတယ်လို့ ကုလကပြောကြား ထားပါတယ်။ “အခြေအနေတွေဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားဖို့အထောက်အကူမဖြစ်သေးဘူး”လို့ ကုလ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖြစ်သူ ဖီလစ်ပိုဂရန်ဒီက လုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသံအမတ်ဟောင်ဒိုဆွန်က တစ်ချို့သံတမန်တွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲသွားရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြားသလို “ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မသွားရောက်ဖို့အကြောင်းကဒါဟာအချိန်ကောင်းမဟုတ်ဘူး”လို့ ကူဝိတ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာကုလသံအမတ် မန်ဆော အာယဒ် အဲလ်-အိုတာဘိုင်က ဒီလကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာရဲ့ဟောင်ဒိုဆွန်က မြန်မာစစ်တပ် ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ ARSA သောင်းကျန်းသူ၁၀ဦးကို အင်းဒင်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာသုတ်သင်ပြီးမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေဟာစစ်တပ်နဲ့ရဲအရာရှိတွေနဲ့ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့တစ်ချို့ရွာသားတွေပါဝင်ပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တာဝန်ယူမှုနဲ့ အားပေးမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်”လို့ သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်လှမ်းမှုတွေအတွက် ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး “မြန်မာဟာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဒီဇင်ဘာမှာသတင်းထောက်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုဟာ သတင်းထောက်လှမ်းရေးလုပ်မှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်စာတမ်းစာတမ်းတွေကိုတရားမ၀င်ပိုင်ဆိုင်ထားမှုအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်”လို့ ဟောင်ဒိုဆွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“နိုင်ငံသားတိုင်းဟာအမိမြေရဲ့တည်ရှိဥပဒေကိုသစ္စာဆိုထားတာဖြစ်ပြီး သတင်းထောက်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်”လို့ သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ နယ်သာလန်နဲ့ ကာဇက်စတန်တို့ဟာ အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်း ရိုက်တာသတင်းထောက်တွေကိုပြန်လွှတ်သွားဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
Reuters သတင်းဌာနပါ Michelle Nichols ရေးသားသည့် “US. Urges U.N. to hold Myanmar military accountable for ethnic cleansing” အမည်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်သတင်းကိုညောင်နီရွက်(Myanmar Muslim Media) ကမြန်မာဘာသာသို့ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုသည်။
← သေနတ်သမား ကြည်လင်းကို သေဒဏ် ပေးလိုက်ပြီ
The speech delivered by Brigadier General Aung Gyi on4July 1961 →
ရှေးဟောငျး ဗလီတဈလုံးကို ရကွေီးမှုဒဏျမှ လှတျကငျးရာသို့ မဖွိုမဖကျြဆီးဘဲ ရှပွေ့ောငျး သယျဆောငျနကွေပုံ
Documents of Arakan State
The late general Aung San’s hand-written letter to “Bhai Shid” (Brother Rashid)
Anwar to become the Prime Minister of Malaysia by May 2020 By ZIININE A.S on January 15, 2020
ICJ မှာ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ့် အပေါ် ဥပဒေအရ ပြင်ဆင် ထားပြီလို့ မြန်မာပြော
ဇန်နဝါရီ ၂၃ မှာ အိုင်စီဂျေဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်
ကြားဖြတ်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၃ ရက်နေ့ ICJ ချမှတ်မည်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပိတ်ပင် တားမြစ်ထားတဲ့ နေရာ (၁၀) ခု
ဂျော်ဒန် ဘုရင့်သမီး မင်းသမီး စလ်မာ ဂျော်ဒန် လေတပ် ပထမဆုံး အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူး အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်နိုင်
အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အ ရေးဆွေးနွေး
ရခိုင်မှာ စီမံကိန်းလုပ်ဖို့ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခု အဆိုပြု
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဝါရှင်တန်သို့ လာရောက်ရန် သမ္မတထရန့် ဖိတ်ကြား
ဂူတာပြင် စစ်ခုံရုံးတရားခွင်နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
Iran Coup (ရေနံစစ်ပွဲအစ)
“အီရတ်မှာရှိတဲ့ ကန် လေတပ် အခြေစိုက် စခန်း အီရန်တိုက်ခိုက်”
အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အင်တာဗျဓ
Indigenous Mapping: Ethnic Communities from Around the World
ICJ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာ နိုင်ငံတကာ မီဒီ ယာ မျှမျှတတ မရေးပါ
၂၀၂၀ မှာ မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်လည် မြှင့်တင်နိုင်မည် လား
သန်းခေါင် စာရင်းသည် အိမ်ထောင်စု စာရင်း မဟုတ်ပါ …
လယောဉျတငျသင်ျဘောအုပျစု DF-21D ဒုံးကညျြတှနေဲ့ အပဈခံရပွီး စဈရှုံးနိုငျခွေ ရှိတယျလို့ အမရေိကနျလှတျတျော အစီရငျခံ
အီရနျရဲ့ ပဈမှတျ ၅၀ ကြျောကို တိုကျခိုကျဖို့ အသငျ့ခြိနျရှယျထားပွီးဖွဈကွောငျး သတငျးထုတျပွနျ
Ethnic Groups in Burma by Martin Smith
ပါလီမန်အမတ် မစ္စတာ ဂဖါးရ်မှ နိုင်ငံတော် အစိုးရထံ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ – Mr MA Gaffar MP and His Memorandum
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ် မှုအား မှတ်တင်ခြင်း (US သံရုံး)
Burma Violence Burmese Report August 2013
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ‌ငွေစက္ကူ၏ နိမိတ်ပုံအဟောနှင့် ကြီးပွါးလာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ
Aung San Suu Kyi’s Fall From Grace: Nobel Peace Prize to Denying Genocide
Kufi Annan: Rakhine Commision Final Report (English version)
Rakhine Commission Final Report (President Dr. Myo Myint)
မြန်မာမူစလင်တို့အား ရှေးမြန်မာမင်းများ ချီးမြှင့်ခဲ့ပုံ
၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း သတင်းများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်ပြောင်း ကာလ စာပေ အခန်းကဏ္ဍ မေးမြန်းခန်း၊
ဝီဂါမွတ်စလင်များကိုိနှိပ်စက်မှု တရုတ်၏ ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲ ကမ္ဘာ့နုိင်ငံများ သပိတ်မှောက်ရန် တောင်းဆို
အစ္စတန်ဘူရှိဆော်ဒီသံရုံးအတွင်း သတင်းထောက်သတ်မှု ဆော်ဒီ (၅)ဦး သေဒဏ်စီရင်ချက်ချ
ရိုဟင်ဂျာများကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ကုလအထွေထွေ ညီလာခံက ပြစ်တင် ရှုတ်ချမှု မဲခွဲဆုံးဖြတ်
UN General Assembly votes to condemn human rights abuses of Myanmar’s Rohingya
ရခိုငျကိစ်စ အတှကျ လှတျလပျသော စုံစမျး စဈဆေးရေး ကျောမရှငျ၏ နောကျဆုံး အစီရငျခံစာ သမ်မတ ထံတငျမညျ
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အစ္စလာမ် သာသနာ by ပသီဦးကိုကိုလေး
ဥပဒစေိုးမိုးရေးဆိုတာ ဘာလဲ? လူ့အခှငျ့အရေး ရှနေ့ေ ဆရာ ဦးအောငျထူး
“နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ICJ ထွက်ဆိုချက် ဂျီနိုဆိုက် ကို ကျော်လွှားနိုင်မလား (သို့) ?
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (531) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (5) ဗဟုသုကဏ္ဍ (23) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,359) သတင်းများ (12,366) သမိုင်း (467) သုတစာပေကဏ္ဍ (64) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (363) အင်တာဗျူး(282) အစ္စလာမ်ဘာသာ (348) အထူးကဏ္ဍ (2,081) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (190) အထွေထွေ (39) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (7) ဥပဒေ (218) ဆောင်းပါးများ (4,566) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (14) English Dictionary (7) Other Dictionary (2) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (11) English – Rohingya (3) English Version (1,658) Articles (761) Documents (110) History (295) Arakan History (224) Burmese History (58) M-M History (46) Scripts (5) World History (47) Interview (22) Laws (13) News (1,000) Breaking News (283) Local News (292) Open Letter (12) Other News (10) World News (589) Religious (43) Islamic (41) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (258) Introduction (5) Link (260) Movie (187) Other Dictionary (6) Photos (757) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (411) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month January 2020 (35) December 2019 (143) November 2019 (131) October 2019 (51) September 2019 (2) July 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (7) March 2019 (4) February 2019 (31) January 2019 (24) December 2018 (9) November 2018 (19) October 2018 (27) September 2018 (51) August 2018 (37) July 2018 (82) June 2018 (86) May 2018 (102) April 2018 (69) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)